ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस् - News20 Media
January 11, 2020 N20LeaveaComment on ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्
काठमाडौं– ल्यापटक तथा कम्प्युटर मानिसहरुका लागि अनिवार्यजस्तै हुन्छ । प्रविधिको जमानामा आफ्ना कामहरुलाई छिटो–छरितो र गुणस्तरीय बनाउन यी वस्तुहरु अनिवार्यजस्तै हुन्छन् ।ल्यापटपका केही विशेष कुरामा ध्यान दिइएन भने हतारको निर्णयले पछुताउनु शिवाय केही हुँदैन । पैसाको नास एकातिर हुन्छ भने अर्को तिर तपाइले खाेजेको काम गर्न सक्नुहुन्न । किनेको केही महिनामै ल्यापटपले निकै तनाब दिन थाल्छ ।
ल्यापटप सधैँ आधिकारिक डिलरबाट ब्रान्डेड मात्र किन्नुपर्छ । खुद्रा पसल वा अन्य मानिसमार्फत किन्दा नक्कली पर्न सक्छ । फिचर्स अनिवार्य हेर्नुपर्छ । स्पिड राम्रो भएको उच्चस्तरीय ल्यापटपमा मल्टिकोर प्रोसेसर आवश्यक हुन्छ । जसमध्ये इन्टेल र एएमडी प्रोसेसर भएको ल्यापटप राम्रो हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा अपरेटिङ सिस्टम हो । तसर्थ, जहिले पनि प्रिलोइड अपरेटिङ सिस्टम भएको मात्र किन्नुपर्छ ।
उच्च सञ्चय क्षमता (स्टोरेज क्यापासिटी) भएको ल्यापटप राम्रो हुन्छ । जसमा पनि फ्लाइस ड्राइभयुक्त उपयुक्त हो । यस्तोमा डाटा नष्ट हुने सम्भावना हुँदैन ।प्रयोगका हिसाबले उपयुक्त आकार र डिजाइन छनोट गर्नु आवश्यक हुन्छ । जस्तै, अफिस वा घरका लागि हो भने ठूलो साइजमा किन्न सकिन्छ । ठूलो स्क्रिनमा काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
June 16, 2020 June 16, 2020 N20